Ibrahimovic oo kasoo hor jeestay in mar afaraad Lionel Messi la siiyo Ballon d'or. - Caasimada Online
Home Warar Ibrahimovic oo kasoo hor jeestay in mar afaraad Lionel Messi la siiyo...
Ibrahimovic oo kasoo hor jeestay in mar afaraad Lionel Messi la siiyo Ballon d’or.
Weeraryahanka kooxda PSG Zlatan Ibrahimovic ayaa si weyn uga soo hor jeestay in Abaal marinta ugu weyn caalamka ee ciyaaryahan la gudoonsiiyo Ballon d’or in markii afaraad ee isku xigta la gudoonsiiyo xidiga Barcelona Lionel Messi.
Ibra ayaana sheegay in Messi uusan xilli ciyaareedka sameyn wax lagu siiyo uusana soo bandhigan ciyaarihii lagu yaqaanay isagoona sheegay in xitta uusan kooxdiisa koobab muhim ah la qaadin sanadii hore.
“Messi sedax jeer oo isku xigta ayuu ku guuleystay Abaal marintaan, hadii mar afaraad la siiyo waxaa adkaan doonta in ciyaaryahano kale ay nasiib u yeeshaan,” ayuu yiri weeraryahankii hore ee Barcelona.